Guddiga doorashooyinka oo bilaabey kulamo la xiriira doorashada soo socota - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Guddiga doorashooyinka oo bilaabey kulamo la xiriira doorashada soo socota
Guddiga doorashooyinka oo bilaabey kulamo la xiriira doorashada soo socota
Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka ayaa maanta magaalada Baydhabo kula kulmay qaar kamida Bulshadada halkaa ku dhaqan, kulanka oo ujeedadiisu ahayd “Wacyigalinta bulshada ee Doorashooyinka 2020-2021 ayaa diiradda lagu saaray in bulshada xog laga siiyo hawlaha guddiga iyo arimaha la xariira sharciga doorashooyinka.
Guddoomiye ku xigeenka Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka Aadam Cabdinaasir ayaa furay kulanka isagoo soo sharraxaad ka bixiyay muhiimmadda wacyigalinta ay bulshada u leedahay iyo sida ay GMDQ oga go’antahay la tashiga bulshada Soomaaliyeed meel kasto oo ay joogaan.
Madaxa xafiiska Guddiga ee Koonfur Galbeed Yuusuf Cabdulkaadir Maxamed ayaa madasha kasoo jeediyay sooyaal kooban oo ku aaddan asaaska GMDQ iyo hawlaha u soo qabsoomay si ay bulshada kasoo qaybgashay kulanka ay wax oga ogaadaan hawlaha Guddiga.
Sidoo kale waxa kulanka ka hadlay Komishineer Xuseen Cabdi Aadan oo ku dheeraday ka shekeynta Sharciga Doorashooyinka iyo hanaanka uu soo maray isagoo ku amaanay labada aqal ansixinta Sharciga doorashooyinka oo wixii hadda ka danbeeyo sugayo saxiixa Madaxwaynaha Jamhuuriyadda Fedeeralka Soomaaliya. Komishineer Xuseen ayaa yiri annagu sharciga ma samaynno lkn waxaan nahay hay’addii fulin lahayd sharciga.
Komishineer Xuseen ayaa sidoo kale shirka ka sheegay in dalkaani ay ka dhici karto doorasho qof iyo cod, GMDQ uu diyaar u yahay ka shaqaynta qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah lagana rabo shacabka in ay aaminaan in doorasha dhici karto ayna doortaan dadka iyaga matali lahaa.
Ugu danbayn bulshadii ka soo qaybgashay kulanka ayaa su’aala ku saabsan arimaha doorashooyinka waydiiyay komishineerada, xubnihii Guddiga ayaa ka jawaabay su’aalahii la waydiiyay.
Previous articleManchester United oo Go’aan ka qaadatay Ighalo
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo amarsiiyay Hay’addaha garsoorka